Suuqgeynta Xogta Lagu Wado ayaa kululaaneysa! | Martech Zone
Suuqgeynta Xogta Lagu Wado ayaa kululaaneysa!
Sabti, Noofembar 9, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qaar ka mid ah natiijooyinka xiisaha leh ee laga helay BlueKai daraasad ku saabsan istaraatiijiyadaha suuq geynta xogta ku saleysan. Waxaan u maleynayay inay si gaar ah u xiiso galineyso dhaqdhaqaaqa muhiimadda markii ay timaaddo fursadaha iskutallaabta / marinnada iskutallaabta ugu habboon. In kasta oo suuqgeynta mashiinka raadinta ay wali fure u tahay, haddana si aad ah ayey hoos ugu dhacday. Waxaan aaminsanahay inay taasi sabab u tahay qarinta Google ee keywords iyo adkaynta algorithms-ka ay disho Warshadaha SEO. Suuqgeyaashu waxay dib ugu noqdeen iyagoo eegaya sawirka weyn ee ku saabsan waxa saamaynta ugu badan ku leh dakhliga halkii ay eryan lahaayeen ereyada muhiimka ah iyo darajaynta.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan arko emayl ku boodaya 5-ta sare iyo hoos u dhaca bulshada. Suuqgeynta emailka waa warshad 20 jir ah - qadiimi ah oo ku saabsan internetka oo aan aad u jinsi ahayn. Laakiin aaladaha Suuqgeynta Suuqgeynta (sida kuwa kafaala qaaday Xaqiiqda Isdhexgalka) waa soo celinta galmada iyada oo dadaallada suuqgeynta ee xog-kicinta aadka loo habeeyay. Bulshadu wali waa istiraatiijiyad wax ku ool ah, laakiin shirkaduhu way ogyihiin in suuqgeynta iimaylku ay tahay mid lama huraan ah marka ay timaaddo riixitaanka suuqgeynta iyo haynta!
Way fiicantahay in la arko fiidiyowga dareenka la siiyay sidoo kale! Qiimaha ayaa hoos u dhacay filashooyinka fiidiyowga ayaa kordhay. Waxaan ku riixeynaa dhammaan macaamiisheenna sidii aan u horumarin lahayn maktabadaha fiidiyowga ah (waxaan hadda leenahay bogga Fiidiyow Suuqgeynta ah!) Oo waxaan u dhigeynaa hore iyo bartamaha bog kasta oo ka mid ah boggooda. Fiiri ah Noocyada Fiidiyowyada Sharaxa ka xayeysiiyahayaga Yum Yum Videos fikradaha qaar!
Tags: qalabayntabullaykaiDatasuuq-geynta xogtasuuq geynta macluumaadkaemailinfographicvideo suuq geyntaFiidiyowyada SuuqgeyntaSuuq Goobidwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuq